Maxkamad Xukuntay Duq Magaalo Oo Hadalo Naceyb Ah Ka Sheegay Muslimiinta Magaaladiisa Ku Nool - Wargane News
Home Somali News Maxkamad Xukuntay Duq Magaalo Oo Hadalo Naceyb Ah Ka Sheegay Muslimiinta Magaaladiisa...
Maxkamad ayaa 2000 oo Euro ku ganaaxday Nin duq magaalo ka ah waddanka qaaradda Yurub ee Faransiiska ka dib markii lagu helay inuu sheegay hadal nacayb ku salaysan oo ka dhan ah Muslimiinta gaar ahaan Muslimiin badan oo magaalada uu duqa u yahay ku nool kuwaasi oo uu kula kacay hadalo loo qaatay in ay cunsuriyadi ka muuqato.
Robert Menard oo ah duqa magaalada Beziers oo ku taalla koonfurta dalka Faransiiska ayaa xulafo la ah xisbiga soogalooti diidka ee National Front wakhti dalkaasi Faransiiska ay ku soo badanayso aragtida muslim iyo soo galooti nacaybka ah doorashana lagu guda jiro ahna wakhtiga ay inta badan xusbiyada aragtidaasi qabaa ay dadka u soo ban dhigaan afkaartooda soo galooti diidka ah si ay codad badan uga helaan dadka dalkaasi oo in badan oo ka mid ahi khaati ka taagan yihiin arrinkaasi.
Ninkan ayaa sheegay in in carruurta Muslimiintu ay ku badan yihiin iskuulada degaankiisa, isagoo maalintii koowaad ee lagu noqonayay iskuulada Faransiiska bartiisa Twitterkiisa ku soo qoray in uu markhaati ka yahay dhalan rog baaxad leh.
Hadalkaas kala qaybinta ah ayaa loo adeegsaday in lagu sharaxo eedaymaha ah in bulshadii Faransiiska ee Kiristaanka cad ahayd ay baddalayaan dad soogalooti ah.
Menard oo waraysi siiyay telefishinka LCI ayaa sheegay “In fasal ka mid ah iskuul ku yaalla bartamaha magaaladiisa ay 91% carruurta dhigata yihiin Muslimiin, arrintaasina waa dhibaato. dulqaadku xad ayuu leeyahay” ayuu yiri ninkan.
Shuruucda Faransiisku waxay mamnuucdaa in tirokoob lagu sameeyo diinta ay dadku aaminsan yihiin iyo qawmiyadaha ay kala yihiin. maxkamaddan ayaa digniin u dirtay ninkan maayarka ah.